Tononkira 5: 1-16
Tononkira 4 Tononkira 5 Tononkira 6
Efa tonga eto an-tsahako aho, ry havako ampakariko; Mioty ny miorako mbamin'ny zava-manitro aho; Efa homana ny toho-tanteliko mbamin'ny tanteliko aho, Ary efa misotro ny divaiko mbamin'ny rononoko; Homàna hianareo, ry sakaizako, Misotroa, eny, mivokisa divay, ry malala.
Natory aho, nefa nahatsiaro ihany ny foko; Injay! ny feon'ny malalako, izay mandondona ka manao hoe: Vohay aho, ry havako ampakariko, Ry voromailalako, ilay ahy tsy misy kilema; Fa vonton'ando ny lohako, Ny voloko milantolanto dia kotsan'ny andon'ny alina.
Fa hoy izaho: Efa niala akanjo aho, Ka hataoko ahoana indray no fiakanjo ? Efa nioza tongotra aho, Ka hataoko ahoana no fandoto azy ?
Nitsangana hamoha varavarana ny malalako ihany aho, Ary nitete miora ny tànako, Eny, ny rantsan-tànako nitete ranon'ny miora Teo amin'ny famohana ny hidin-trano.
Nahita ahy ny antily izay mandehandeha eny an-tanàna, Dia nikapoka ka nandratra ahy; Ny mpiambina ny mànda nanala ny lamba fisaronako.
Mampianiana anareo aho, ry zanakavavin'i Jerosalema: Raha mba hitanareo re ny malalako, Dia ahoana no holazainareo aminy ? Lazao fa mararim-pitia aho.
Inona ny malalanao mihoatra noho malala sasany, Ry tsara tarehy amin'ny vehivavy ? Inona ny malalanao mihoatra noho malala sasany, No dia mampianiana anay toy izao hianao ?
Ny masony dia tahaka ny voroma eo anilan'ny sakeli-drano, Mandro amin'ny ronono sady tahaka ny vato soa alatsaka an-tranontranony izy.
Ny tànany dia tahaka ny anja-bolamena voaisy krysolita; Ny tenany dia tahaka ny ivory voarafitra tsara sady misarona safira;
Mamy dia mamy ny vavany, eny, mahate-ho-tia avokoa izy. Toy izany ny malalako, ary toy izany ny sakaizako, Ry zanakavavin'i Jerosalema!